Ho tafavoaka velona ka hiroborobo! UNWTO, fotoana hamerenana endrika endrika fizahan-tany!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ho tafavoaka velona ka hiroborobo! UNWTO, fotoana hamerenana endrika endrika fizahan-tany!
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Editorial • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny sehatry ny fizahantany dia mibanjina hatrany hatrany an'i Arabia Saodita hahazoana fitarihana sy fanampiana. Miharihary izany tamin'ny fivorian'ny komisiona rezionaly an'ny UNWTO ho an'i Afrika any Cabo Verde. “Fotoana hamerenana endrika endrika ny fizahantany amin'ny ho avy” hoy ny hafatry ny mpitondra Saodiana ho an'ny Fizahantany manerantany sy Afrika.
Ny fivoriana faha-64 an'ny Vaomiera UNWTO ho an'i Afrika dia tanterahina ao Sal, Cabo Verde, ao amin'ny Hotely Hilton.
Ny teboka ifanakalozan-kevitra dia misy ny fanavaozana ny volavolan-dalàna mifehy ny fiarovana ny mpizahatany, ny fanomanana ny fivoriambe ankapobeny ary ny fanolorana kandidà.
Avy any Arabia Saodita ny kintan'ity hetsika ity. izy Ahmed al-Khatib, Minisitry ny fizahantany ho an'ny Arabia Saodita, dia nanao fanamarihana izay nanakoako nandritra ny hetsika sy ireo solontena.
UNWTO dia manana komisiona isam-paritra enina - Afrika, Amerika, Azia Atsinanana ary Pasifika, Eropa, Moyen Orient ary Azia atsimo. Ireo komisiona dia mivory farafahakeliny indray mandeha isan-taona ary voaforon'ny mpikambana feno sy ny mpikambana mpiara-miombon'antoka amin'izany faritra izany. Mandray anjara amin'ny maha mpanara-maso ny mpikambana ao amin'ny faritra.
Tao anatin'ny krizy COVID-19, mpikambana iray ao amin'ny UNWTO no niavaka tamin'ny fanatrehana ny fivorian'ny komisiona isam-paritra nanerana an'izao tontolo izao.
Ity mpikambana ity dia ny Fanjakana Saudi Arabia, solontenan'ny HE Ahmed al-Khatib, ny minisitry ny fizahantany.
Ny minisitra dia hita fa "kintana" tsy azo iadian-kevitra amin'ny fivoriana na hetsika manatrika azy, ary manatrika maro amin'izy ireo izy, mampiseho ny fahavononany amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Arabia Saodita nandany vola an'arivony tapitrisa hanampiana an'ity sehatra ity tsy amin'ny fanjakana ihany fa amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao. Ny faniriana hitondra ivon'ny Travel sy ny fizahan-tany any Riyadh dia misy ny fivelaran'ny foiben'ny UNWTO.
Ireo masoivoho ao amin'ny Vaomieram-paritra UNWTO ho an'i Afrika ankehitriny dia nibanjina akaiky rehefa nitory tamin'ny solontena i HE Ahmed al-Khatib. Notsipihiny ireto manaraka ireto:
Ny areti-mandringana dia nanasongadina ny filàna maika ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena matanjaka, fandrindrana ary fitarihana.
Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa izahay manerana an'i Afrika mba hahazoana antoka fa ny indostrian'ny fizahantany manerantany dia miorina amin'ny lesona an'ny COVID-19.
Tsy afaka manana krizy iraisampirenena isika hanimbana ity sehatra ity amin'ny ho avy toa ny nataony.
Fa manana hafatra matanjaka sy miabo aho zaraiko anio. Afaka mihetsika isika izao mba hahazoana antoka fa hamafisina ity sehatra lehibe ity mba hiatrehana ireo fanamby amin'ny ho avy.
al-Khatib namintina ny hafany:
Ho tafavoaka velona ka hiroborobo!
… Tonga ny famolavolana ny fizahan-tany ho an'ny ho avy!
Ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny sehatry ny fizahantany any Afrika
Ny fiatraikan'ny COVID-19 tamin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena any Afrika dia niafara tamin'ny fihenan'ny 74% ny isan'ny mpizahatany iraisam-pirenena ary ny 85% amin'ny resa-pizahantany iraisam-pirenena. Ny angona ho an'ny 2021 dia mampiseho fa niharan'ny fihenan'ny 81% ny fahatongavan'ireo firenena iraisam-pirenena tao anatin'ny 5 volana voalohany tamin'ny 2021 raha oharina tamin'ny taona 2019. Ny fiantraikan'ny zana-tany dia nampiseho fa namoy ny 78% ny olona tonga tany Afrika Avaratra tamin'ny taona 2020 ary 72% i Sub-Sahara Africa.
Io fironana io ihany dia hita ao amin'ny angona 2021 izay mampiseho fihenan'ny 83% sy 80% ho an'ny 5 volana voalohany amin'ny taona.
Hatramin'ny 1 Jona 2021, Afrika dia manana ambaratonga ambany kokoa amin'ny famerana ny dia raha oharina amin'ireo faritra manerantany, araka ny tatitra faha-10 nataon'ny UNWTO momba ny fameperana ny dia. Ny 70% amin'ireo toerana rehetra aleha any Azia sy Pasifika dia mihidy tanteraka, raha ampitahaina amin'ny 13% fotsiny any Eropa, ary koa 20% any Amerika, 19% any Afrika, ary 31% any Moyen Orient.
Ny angona azo alaina ao amin'ny UNWTO Tourism Recovery Tracker ho an'ny indostria indostrialy isan-karazany dia manamafy ny fironana misy fiantraikany etsy ambony.
Ny data avy amin'ny International Civil Aviation Organisation (ICAO) dia mampiseho fa ny tahan'ny rivotra an-trano dia nidina 33% raha oharina amin'ny 2019 hatramin'ny Jolay, raha 53% kosa ny fahaizan'ny zotra iraisam-pirenena. Mandritra izany fotoana izany, ny angona momba ny famandrihana fitsangantsanganana an'habakabaka avy amin'ny ForwardKeys dia mampiseho fihenan'ny 75% amin'ny famandrihan-drivotra tena izy.
Ireo valiny roa ireo dia tsara kokoa noho ny salan'isan'izao tontolo izao izay 71% ny fahaizan'ny rivotra amin'ny zotra iraisam-pirenena ary 88% ny famandrihana.
Ny angon-drakitra STR dia mampiseho fa nahatratra 42% ny mponina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny Jolay 2021, fanatsarana mazava tsara rehefa nandeha ny taona 2021. Araka ny faritra, Afrika Avaratra sy Atsimon'i Sahara (38% ary 37% isam-batan'olona) dia mampiseho vokatra tsara kokoa noho i Afrika atsimo (18%) izay niharatsy ny toe-draharaha tamin'ny Jolay.
Fananganana birao UNWTO isam-paritra
Ireto firenena mpikambana 5 manaraka ireto ao amin'ny faritra Afrika: Afrika Atsimo, Maroc, Ghana, Cabo Verde, ary Kenya dia nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny sekretera jeneraly ny fanehoan'izy ireo fahalianana amin'ny fananganana birao iray an'ny UNWTO ho an'i Afrika hanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana. ho famenon'ny fampiharana ny Agenda for Africa-Tourism for Inclusive Growth ary hampahafantatra ny fizotran-kevitry ny asa aman-draharahan'ny UNWTO sy ny asa mba hampifanarahana azy ireo akaiky kokoa amin'ny filàna sy ny laharam-pahamehan'ny firenena mpikambana ao Afrika.
Ny komitin'ny krizy fizahan-tany manerantany
Tao amin'ny tatitra natolotra ny solontena tao Cabo Verde, ny sekretera jeneraly dia nilaza tamin'ny tatitra nataony fa mba hiantohana ny valiny mifandrindra sy mandaitra dia nanangana ny Komitin'ny krizy fizahan-tany manerantany miaraka amin'ireo mpiaramiombon'antoka iraisam-pirenena sy tsy miankina ny Sekretera jeneraly. ny fivoriana voalohany nataony tamin'ny 19 martsa 2020.
Ny Komity dia misy UNWTO, solontenan'ny Firenena mpikambana ao aminy (Sefon'ny Birao mpanatanteraka UNWTO ary komisiona isam-paritra enina ary koa ny fanjakana sasany natolotry ny Seza ny Komisiona), ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny fiaramanidina sivily (ICAO ), ny International Maritime Organization (IMO), ny International Labor Organization (ILO), ny Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), izao tontolo izao
Banky (WB), ary ny sehatra tsy miankina - ny mpikambana ao amin'ny UNWTO Affiliate, ny Council Council International (ACI), ny Cruise Lines International Association (CLIA), ny International Air Transport Association (IATA), ary ny World Travel and Tourism Council (WTTC).
Taorian'ny fivorian'ny komity krizy 6 dia nanapa-kevitra ny hamorona komity teknika hamorona fenitra sy fanao manerantany hamerenana ny fizahantany indray.
Tamin'ny 8 aprily, tamin'ny fivoriany faha-9, ny Komity dia nanohana ny tolo-kevitry ny UNWTO hanombohana indray ny fizahantany misy faritra efatra lehibe: 4) Avereno ny fivezivezena amin'ny sisin-tany azo antoka; 1) Mampiroborobo ny dia azo antoka amin'ny toerana rehetra amin'ny dia; 2) Manome vola ho an'ny orinasa ary miaro asa; ary 3) Avereno ny fahatokisan'ny mpandeha
Amin'ny tenifototra #traveltomorrow, UNWTO namoaka tatitra amin'ny fanohanana asa sy toekarena amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany.
Ireo mpikarakara avy amin'ny fikambanana sasany voalaza ao amin'ny tatitra nataon'ny sekretera jeneraly dia tsy dia nampientanentana loatra.
Rehefa eTurboNews nanontany mpanantanteraka WTTC momba ny fahita matetika amin'ny fivorian'ny Komity momba ny krizy manerantany, ny valiny dia: Tsy azonao antoka ny amin'ny fahita matetika fa tsy mahazatra. Tsy dia fantatsika loatra izany. Manana ny vondron-kery ataon'ny mpikambana izahay izay mivory isan-kerinandro mandritra ny herintaona mahery.
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube dia mandray tsara ny hafatry ny fanantenana, ny vina ary ny fitarihana Arabia Saodita izay nanao sonia an'i Afrika.
Hoy izy eTurboNews, “Ny Birao fizahantany afrikanina Vonona hiara-hiasa amin'ny UNWTO sy ny Fanjakana Saudi Arabia mba hahatonga an'i Afrika ho 'Destination of Choice for the World.' ”
Mary Kalikawe hoy:
September 4, 2021 ao amin'ny 19: 13
Minisitry ny fizahantany any Bravo Arabia Saodita. Lehiben'ny Bravo ATB Ncube